Na-achọsi ike nke a na-egwu PBS ọrụ si Den Kolder: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 5 June 2019	• 20 Comments
Na-atụ anya na PBS-er (onye na-ahụ maka ndị ọrụ ọrụ) na-egbu ndụ site n'aka clique na Den Kolder. Biko mara na oge a enweghị mmụcha ọ bụ! Oge a, ọ bụghị PsyOp (arụ ọrụ uche) iji megharịa iwu ọhụrụ.
N'ezie nke a bụ nkọwa nke Mark Rutte na ugbo ọhụrụ TBS gbapụrụ site na ụlọ ọgwụ nke Michael P. na Den Dolder, ma ọ nwere ike ịme ka o doo anya na ị nwere ike ime onye na-adịghị adị adị site na ngwanrọ ihuenyo dị mfe. Foto profaịlụ a weere m ọrụ 10 nkeji (site ebe nrụọrụ weebụ a) ma ana m atụ aro ka ị gụọ isiokwu dị n'okpuru ebe a iji chọpụta otú ọ ga-esi dị mfe iji usoro ndị ahụ mee ihe iji kọọ akụkọ dị iche iche.
Ugbu a, e nwekwara ngwanrọ na ahịa nke na-enye gị ohere ịza ajụjụ ọnụ n'azụ kamera weebụ (ma ọ bụ n'okporo ámá, site na greenscreen) na PC mgbe niile ma tinye ihu abụọ na olu onye ọzọ banyere ya. A na-eme nke a n'oge na-enweghị ihe ọ bụla. Ị nwere ike ịhụ nke a n'okpuru (gụkwuo n'okpuru vidiyo).
Ihe gbasara Anne Faber na Michael P. mere ka oge elekere elekere anya na windo, o yikwara ka akụkọ a na-etinye aka na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọkàikpe, ndị mgbasa ozi na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha na-agbanye iwu ọhụrụ. ndị mmadụ agaghị anabata ya. Site n'ịkpọ ndị mmadụ oké mmetụta, ha kwenyesiri ike na ha ga-akwado mgbanwe dị otú a, n'ihi na onye ọ bụla na-ejikọ ya na anụ ọhịa Michael P.
Usoro mgbasa ozi ekwenyela na anyị niile ga-abụ eziokwu, ma anyị agaghị enwe ike ịlele onwe anyị ma anyị ga-eche na anyị anaghị egwu usoro Hollywood. Ihe si na ya pụta bu na enwere ike wepu ndi mmadu n'enwegh ihe kpatara ya ma wepu ha na nmehie ha n'oge ha nile, n'ihi na iwu adighizi echebe ha. (Gụọ ebe a nke a)
Ihe ndekọ njikọ njikọ: facewaponline.com, telegraaf.nl
Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp ugbu a na-ejikarị onye ọka iwu rịọ onye ọka iwu?
Tags: Anne, na, madder, Faber, agba, ụlọ ọgwụ, klinkiek, Michael, ozi ọma, gbapuru, gbapuru, P., Ụlọ ụlọ, tbs, tbser
5 June 2019 na 20: 19
Ọ bụ otu onye Dekker nke na-agba mbọ ịkwụsị enyemaka iwu, ya mere, onye nwe anyị anatala iwu ya. Beefehl ist befehl. Na mbido, echere m na nwanna nwanna Van van t'ụm agbapụla 😉
5 June 2019 na 20: 24
Foto ahụ chetara m karịsịa nke Leo Blokhuis. Ma eleghị anya, ha ji ya dị ka ihe atụ maka omimi?
5 June 2019 na 20: 29
Anya chetara m Tom van 't Hek ... nke mbụ.
5 June 2019 na 21: 07
Ozi a dị ezigbo mkpa, n'ihi na ọ na-egosi na ha ga-akwadebe iwu ebe a ga-edebe onye ọ bụla n'ime. Ya mere, nkwụsị nke ndokwa ezumike.
5 June 2019 na 21: 08
Goelag bụ goldg na naanị ị ga-anọrịrị na ya ruo ogologo oge nke ndụ gị dị ka onye nhụsianya.
5 June 2019 na 20: 32
..r ma iig a BN'er n'ihi na ọ na-ekwu n'ụzọ doro anya N'ezie. Ị ga-atụ anya na ha ga-etinyekwu oge na-akwadebe nkwenye dị egwu maka onye na-eche echiche dị egwu 😀
5 June 2019 na 20: 35
.. ugbu a, m na-eche na ọ dịkarịrị njọ banyere ihe yiri ya na Brech, ajị agba, uhie wdg. = Ntọala NLP
5 June 2019 na 20: 42
5 June 2019 na 20: 49
@Analyze ghọta ihe ị na-ekwu, ọchụchọ dị ngwa site google na jos b gosipụtara ụdị nsonaazụ ndị a. A kwadoro nke ikpeazụ nke Jos B 8 awa gara aga na ọwa mgbasa ozi dị ka RTL, SBS. Ihe oyiyi a bụ 8 awa ochie ma bụrụ nke Talpa Networks (De Mol)
5 June 2019 na 20: 55
Ha, ụmụ okorobịa si edemede ahụ, agaghị eme mgbalị iji mee spyop credible. Nke mbụ Ha nwere ike. Kedu onye nwere ike iji Hen? Ha nọ n'ọnọdụ niile. Tụkwasị na nke a, ha maara na ọnụ ala iq nke nkezi Neanderlander bụ. Ndị nwere amamihe na-emechi ọnụ ha maka na ha onwe ha bụ akụkụ nke Club nke dị na Neanderland nke na-ekpebi ihe niile.
Ọ bụ ihe doro anya na aghụghọ gị na site na arịlịka / stampụ na ihe nchịkọta Spyop / ihe nkiri na-esite na 'gọọmenti', na-eche echiche siri ike banyere Neanderlander. Ọ bụrụ na ị na-eme ugbu a mmemme! Mer brainwash na-eme ka ụmụ nwoke site na edemede, a dịghị akwụ ha ụgwọ maka ihe ọ bụla, ndị ihu ha na-agbasa na-akpọsa ihe efu na-eche echiche dị oke egwu na-agafe. Ma ọ bụrụgodị na Neanderlander si na ya coma wee chee na ihe dị njọ ebe a. Ihe ọ na-aga ime, ọ nwere ike ime na mgbe ọ matara na ọ ga-alọghachi na cona. Ezi abalị, ndị ohu. Ụmụ nwoke si na edemede ahụ na-achị ọchị n'azụ ihe nkiri ahụ.
6 June 2019 na 18: 10
hahaha na ugbu a na mberede a mmanya n'ihu ya anya, gịnị ka ị pụtara?
6 June 2019 na 00: 07
Ọ bụrụ na ị nwere ihe akaebe na Sinterklaas anaghị adị, mgbe ahụ, ụmụaka ka ga-ekwenye na ọ dị adị, n'ihi na ọ bụ otú ahụ ka ọ ga-esi bụrụ na i kwesịghị igbochi ya, ọ bụ otu nnọkọ, hapụ ụmụaka nanị.
O doro anya na ụmụ amaala anaghị achọ ọrịa psychopaths na-egbu ọchụ n'okporo ámá, mana ugbu a, ndị ọzọ bi na-eweta otu denominator.
Ochie okwu: Na-atụle apụl na pears.
Ọgwụgwụ nke okwu efu n'isiokwu a site na telifon ebe ha na-atụkwasị ndị Nazis elu n'okpuru otu denominator.
Nnukwu ihe omuma iji gbochie nnwere onwe ikwu okwu na nyocha.
6 June 2019 na 06: 21
Ha agaghị ewepụ ihe oyiyi na mgbasa ozi ndị Nazi. Ha bụ ndị na-ebipụta na kesaa ozi a. N'ikpeazụ, ha dị ha mkpa boogeyman. Ịkwa nkịta ọhịa.
6 June 2019 na 09: 16
Ma ọ dịkarịa ala, ha arụrụla ezigbo nwanyị ọhụụ oge a ...
O doro anya nke iwu ọhụrụ ga-eweta.
Nwanyị hụrụ nwanne ya n'anya, ma ọ na-eleta ya mgbe niile n'ụlọ ọgwụ ahụ. "Ị nwere ike ịtụkwasị obi, ana m asị na ọ bụ mmejọ kachasị oke ị nwere ike ime" bụ ma ọ bụ ihe kachasị mma maka nke a. A ghaghị imechi ụzọ nne m, n'ihi na nwanna chọrọ imejọ ya. Ma anyị na-eleta ya kwa izu (n'ihi na ọ bụrụ na ọ na-enweta ọgwụ ya ọ dị mma).
6 June 2019 na 09: 24
Site na 19e nkeji na, Jeroen Pauw na-egosi anyị ihe ngwanrọ ha nwere na ụlọ ọrụ nchịkọta akụkọ. Ọ bụghị nsogbu na-eme ka mmadụ dị nká.
Ọ dịghị nsogbu ị ga-esonye nwanna nwanna nwanyị nke nwere ihu ọma (ma ọ bụ)?
6 June 2019 na 09: 44
Ọ dị ka Rutte! Ha ji Rutte mee ihe! Naanị igosi na ha maara na ọ na-echegbu onwe ya! Ụgbọ okporo ígwè ahụ na-agba! Anyị ga-echekwa iwu ihu igwe (egwu)!
6 June 2019 na 11: 11
Ị gụọ ihe m dere? Emere m foto profaịlụ a dị ka akwụkwọ. Naanị gụọ ọdịnaya nke isiokwu kama ịzaghachi foto ahụ.
6 June 2019 na 11: 17
havebarra trolls adịghị agụ, naanị ha nwere mmasị izipu isiokwu nke mkparịta ụka. Ma eleghị anya iberi nwere ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ na ere ere 😀
6 June 2019 na 10: 56
Ụlọ ahịa foto bụ maka De Mol na ndị enyi, a na-edozi ndị ọzọ.
6 June 2019 na 17: 03
Ọ dabara na ha nwere Pita M .. Lee ahụ efe nye Neanderland. Rina ụra ọzọ ruo mgbe mgbapụ ọzọ a ga-esote. Kedu mba, ndị ohu kweere ihe nile nna na-ekwu.
" Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp ugbu a na-ejikwa ndị ọka iwu rịọ ndị ọkà okwu?
E jidere Peter M. (site na nwanna ahụ na-ekwenye n'aka Jeroen Pauw) »
Nleta nile: 14.463.177
Martin Vrijland op Na steeti ndị uwe ojii, ịchọrọ iwu machibido ndị uwe ojii na-eweta vidiyo na ndị na-enye aka